Isikhokelo se-Android, isikhokelo esisisiseko sabaqalayo kunye namanyathelo okuqala | I-Androidsis
Isikhokelo se-Android, isikhokelo esisisiseko sabaqalayo
URafa Rodríguez Ballesteros | | Tutorials
Ukuba ukhangele i Isikhokelo se-Android kwaye ndiyifumene le posi, okokuqala, yamkelekile. Ufike kule ndlela unokukhetha kuzo. Nokuba ungomnye we "weirdos" ongavumiyo ukuba ne-Smartphone kwaye ekugqibeleni uthathe isigqibo sokuphucula, okanye uvela kwenye inkqubo yokusebenza kwaye ufuna ukuthatha inyathelo eliya kwi-Android, inkqubo yokusebenza yeselfowuni ngokugqwesa. Mhlawumbi usesigaba sokukhangela kwaye unomdla wokwazi ukuba yonke into isebenza njani. Ngakumbi nangakumbi bathabatha inyathelo, phakathi kwezinye izinto kuba baziva ngathi banqanyuliwe kunabanye.
Ukuba ungomnye wabo bagqibe kwelokuba "badlule kwihupula" kwaye bathenge i-smartphone ye-Android bakuxelele ukuba awuyi kuzisola. Namhlanje sizakukhapha inyathelo ngenyathelo kuzo zonke izicwangciso ezisisiseko zokumisela i-Android ukuze amava akho anelise kangangoko. Siza kuba secaleni lakho ukukukhokela kwaye sikuncede wenze ifowuni yakho entsha isebenze ngokupheleleyo. Naphi na apho uvela khona, ndithe, wamkelekile kwi-Android.
1 Yintoni i-Android?
2 Inkqubo evulelekileyo kubo bonke
3 Zithini izendlalelo zokwenza ngokwezifiso kwi-Android?
4 Uyenza njani iakhawunti kaGoogle
5 Iinkonzo zikaGoogle zasimahla
5.1 Iinkonzo zikaGoogle zomsebenzi
5.3 Iimpendulo zemibuzo
5.4 Ukuzonwabisa nokonwaba
6 Uqwalaselo olusisiseko lweselfowuni yakho ye-Android
6.1 Uluseta njani ulwimi lwakho kwi-Android
6.2 Ukuseta isixhobo sakho se-Android njenge "isixhobo esitsha"
6.3 Khetha inethiwekhi ye-wifi ye-smartphone yethu ye-Android
6.4 Ungena njani ngeakhawunti yethu kaGoogle.
6.5 Uyongeza njani enye iakhawunti ye-imeyile
6.6 Qwalasela inkqubo yokhuseleko kunye nokuvula kwi-Android
7 Ukwazi njani ukuba inkqubo yam ye-Android ihlaziyiwe
8 Indlela yokukhuphela usetyenziso kwi-Android
9 Uyifaka njani okanye uyikhupha njani iiapps kwi-Android
10 Izixhobo ezibalulekileyo kwi-Android
10.1 I intanethi
11 Izicelo eziluncedo ze-smartphone yakho
12 Ukhuseleko lwe-Android
13 Ungayigcina njani idatha yam kwi-Android
14 Ungayitshintshela njani idatha yam kwi-Android esuka kwi-iPhone
14.1 Google Drayivu ye-iOS
14.2 Iifoto zikaGoogle ze-iOS
14.3 Hambisa Abafowunelwa boGqithiso / ugcino
15 Ngoku ukulungele ukuntywilisela kwihlabathi le-Android
Ukuba umtsha kweli hlabathi lee-smartphones asizukuzibandakanya neembangi ezingapheliyo. Kufuneka uyazi loo nto I-Android yinkqubo yokusebenza kweGoogle. Kwaye uthini nge Inkqubo yokusebenza kwezixhobo eziphathwayo ezisetyenziswa kakhulu ehlabathini. Inombolo yakho yangoku yabasebenzisi abasandula ukuthunyelwa idlula kwiibhiliyoni ezimbini. Akukho nto. Kwaye namhlanje ikhuphisana phantse nenkqubo yokusebenza ye-Apple, engaphezulu kokuphinda kabini inani labasebenzisi. Singatsho ukuba ISpain lilizwe le-Android kuba ngaphezulu kwe-92% yee-smartphones kwilizwe lethu zisebenza phantsi kwenkqubo eluhlaza ye-android.
Ngo-2017 i-Android Sele kuyiminyaka eli-10 yasungulwa. Ukusebenza ngokukuko ukusukela ngo-2008 kwizixhobo eziphathwayo, kwiipilisi, kwaye kutshanje kwizinto ezinxitywayo. Yenziwe phantsi kwenkxaso yemali kaGoogle yinkampani yesoftware "i-Android Inc.", eya kuthi ekugqibeleni igqibe ukufunyanwa nguGoogle ngo2005. Utata wakhe owaziwayo, uAndy Rubin, kunye neqela leenjineli ezikhethiweyo bafuna ukwenza i-Linux-based. inkqubo. Le yindlela inkqubo yokusebenza ye-Android eya kukhanya ngayo.
Inkqubo evulelekileyo kubo bonke
Izibonelelo ezibonelelwa yile nkqubo yokusebenza ngaphezulu kwenkqubo ye-Apple ye-Apple kukuba yinkqubo evulekileyo. Nawuphi na umenzi unokuyisebenzisa kwaye ayilungelelanise nezixhobo zabo. Y nawuphi na umphuhlisi angenza usetyenziso olufanayo Enkosi kwikhithi enikezelwa nguGoogle njengokukhutshelwa simahla. Ngamafutshane, ukukwazi ukuyisebenzisa ngokukhululekileyo kwinto eyenzelwe yona. Inkqubo yokusebenza yezixhobo ezikrwada ezikwisikrini. Ngele ndlela, Naluphi na uphawu olwenza i-Smartphone, nelayisensi enyanzelekileyo kaGoogleUngasebenzisa i-Android njengenkqubo yokusebenza. Yeyiphi i-Apple, umzekelo, engayenziyo. Okwangoku kungumkhwa wokuba nabavelisi abasebenzisa ii-OS zabo, ezinje ngeBlackBerry umzekelo, baphele benikezela kwinkqubo yehlabathi.
I-Android yi Inkqubo yokusebenza esekwe kulwakhiwo lwesicelo. Ezona ziphambili, eziqwalaselwe njengezisisiseko ekusebenzeni kwazo, zibandakanyiwe ngokomgangatho yinkqubo yokusebenza ngokwayo. Inkqubo eyakhelwe kuyilo olwenzelwe ukwenza lula ukusetyenziswa kwakhona kwecandelo. Ke, nasiphi na isicelo sinokusebenzisa izixhobo zefowuni, kwaye umntu anokuyitshintsha. Emva kwexesha siza kuthetha ngezicelo, ukufakelwa kwazo kwaye siza kukunika iingcebiso.
Zithini izendlalelo zokwenza ngokwezifiso kwi-Android?
Njengoko sele sichazile, phantse bonke abavelisi bangoku basebenzisa inkqubo kaGoogle ukuzisa izixhobo zabo ebomini. Kwaye kukho ezinye iinkampani ezithi, ngenjongo yokwahlulahlula kwabanye, zisebenzise izinto ezibizwa ngokuba zezomntu. Iya kuba, icaciswe ngendlela ecacileyo, njengoko "Nxiba" inkqubo ye-Android nezinye iimpahla. Inkqubo yokusebenza ihlala injalo, kodwa ngokwembonakalo yahlukile. Umfanekiso owubonisayo wahlukile kolo wenziwe nguGoogle. Apha inqanaba lokwenziwa komsebenzi lidlala indima ebalulekileyo kufezekisiwe ngokufakwa kwomaleko kwi-Android.
Kukho iifemu, ezinje ngeSony, ezisebenzayo Ukwahlulahlula ngokwezifiso ulwahlulo, nditsho nokunciphisa ukufikelela konxibelelwano kwezinye iimeko. Amanqaku afana noXiaomi, uguqulelo lwenkqubo yokusebenza, ebizwa ngokuba yi-MIUI, ifumana uphononongo oluhle kakhulu kubasebenzisi bayo. Kwaye ikho abanye abakhetha ukunikela nge "Android" emsulwa, icocekile kakhulu kwaye iyaqwalaseleka.
Ukunambitha imibala. Kodwa sithanda i-Android ngaphandle kwemida kwaye ngaphandle "kokuguqula". Ukusukela ngamanye amaxesha la maleko abangela ukuba sele inamanzi kunye nenkqubo esebenza kakuhle ukuba ihlupheke kukuhla engeyomfuneko.
Uyenza njani iakhawunti kaGoogle
Ungangabinayo i-Android Smartphone, kodwa kunokwenzeka ukuba uneakhawunti ye "imeyile" ye-imeyile. Ukuba sele unayo, oku kuya kuba sisazisi sakho ukuze ukwazi ukusebenzisa zonke iinkonzo zikaGoogle. Ukuba awukenzi iakhawunti yakho kaGoogle okwangoku, kuya kufuneka uyenze ngaphambi kokuqala ngoqwalaselo lwefowuni yakho. Ukwenza oku akuyi kufuna ngaphezulu kwemizuzu emibini. Kule ncwadana Android sichaza yonke into. Inkqubo ifana nokwenza iakhawunti ye-imeyile kuba uya kuyenza loo nto. Ingxaki kuphela onokuyifumana kukuba umntu sele elisebenzisa igama olifunayo. Eminye, kubandakanya uthotho lweenkcukacha zobuqu, uyakudalwa uchongwe kuGoogle kodwa ukuba unamathandabuzo, apha sichaza inyathelo ngenyathelo kunye neendlela ezahlukeneyo yenza iakhawunti yeGoogle.
Nje ukuba uchongwe ukulungele ukufikelela kweyona app inkulu yevenkile kukho, i Play Store. Ngendlela efanayo, unako sebenzisa kwisixhobo sakho se-Android Zonke iinkonzo ezinikezelwa nguGoogle simahla. Njengomgaqo ngokubanzi, zonke ezo zicelo esele zivele zifakiwe izixhobo zethu. Kuxhomekeke kuphawu lwesixhobo, banokuhamba kunye nabezinye iifemu ezifana nabadlali bomculo, njl.
Iinkonzo zikaGoogle zasimahla
UGoogle uzimisele ngokwenza ubomi bethu bube lula. Kwaye uyasinika uthotho lwezixhobo esinokuthi sifumane okuninzi kwii-smartphones zethu ngeyona ndlela intofontofo. Zininzi kwaye zahlukile kangangokuba sinako ukwahlula ngokwamacandelo iintlobo zeenkonzo ezinikezelwa simahla nguGoogle. Kwisikhokelo sethu se-Android sikhethe ezo zinokukunika ezona zininzi ekuqaleni.
Iinkonzo zikaGoogle zomsebenzi
Kweli candelo singasebenzisa
Amaxwebhu kaGoogle, un umhleli wombhalo okwi-Intanethi apho sinokuhlela kwaye sabelane ngalo naluphi na uxwebhu naphi na apho ukhoyo.
Izipredishithi zikaGoogle Oko kukuthi, ispredishithi, kodwa ckunye nokwabelana ngayo, ukuyenza ukuba ibe sesidlangalaleni yokuhlela enye okanye ezingaphezulu, kwaye uyisebenzise naphina.
Iintetho zikaGoogle, eyona nto ikufutshane kule nto uya kuyazi njenge "point of power". Inkqubo ekulula ukuyisebenzisa yokwenza nokudlala intetho yakho.
Google Drive, indawo "ekhuselekileyo" yokugcina ikopi yeefayile zakho amaxwebhu asetyenzisiweyo, kunye nedatha yesicelo.
UGoogle usinika nethuba lokuzilungiselela ngakumbi. Kwaye unowona mxholo ubaluleke kakhulu kwii-smartphones zethu naphi na. Ke siya kuba nazo
Iifoto zeGoogle, engasebenziyo kuphela ukulungiselela ukubanjwa kwethu. Yenza ngokuzenzekelayo ii-albhamu ngemihla okanye ngeendawo. Ukongeza ekunikezeleni kuthi I-15 GB yokugcina ukuze iifoto zingathathi indawo kwisixhobo sethu.
Abaqhagamshelwa kuGoogle isenza ukuba singoyiki ukutshintsha iifowuni ngenxa yokuphulukana neenombolo ezigciniweyo, okanye ukuzidlulisa ngesandla. Ngqamanisa abafowunelwa kunye neakhawunti yakho kaGoogle kwaye baya kuba naphina apho uzichonga khona.
Uphando ikhalenda, ikhalenda kaGoogle ukuze ungalibali nto, nokuba ubhale phantsi yonke into. Izaziso, izikhumbuzo, ii-alamu, akukho nto iya kukusinda.
Kutheni le nto sifuna i-smartphone ukuba asinakuyibuza into, akunjalo? Ukufumana Google entendeni yesandla sakho luluncedo. Ngewijethi kaGoogle efakwe kwangaphambili sinokucela ngokuthetha noGoogle ngayo nantoni na. Okanye ukhangele kwaye uhambe ngendlela eyaziwayo yesicelo sakho. utshaba
Google Chrome ukukhangela kunye nokuhamba ngesicelo esaziwayo kwisikhangeli sakho
Iimaphu zikagoogle. Nokuba ufuna ukwazi ukuba iphi into okanye ungayifumana phi, inkulu "G" ikhona ukukunceda kwangoko. UGoogle akakulahli naphi na apho ukhoyo.
Uguqulelo luka-Google, Iya kwenza ukuba naphi na apho ukhoyo, ulwimi aluyi kuba ngumqobo nakuwe.
I-Smartphone yeyabantu abaninzi abafana nokuphazamiseka. Kwaye kunjalo, sonke siye sakhululeka ngamanye amaxesha ngokulinda ixesha elide. Kukho abo basebenzisa ifowuni yabo ye-Android njengeziko labo lokuzonwabisa kwimultimedia. Ngale nto sinokonwabela inani lezicelo.
YouTube. Iqonga lokusasaza ividiyo ngokugqwesa. Dlala iividiyo zakho ozithandayo, wabelane ngazo okanye uzilayishe ezakho.
Google Play Umculo Ubeka isidlali semultimedia esinobuchule kwisandla sakho. Kwaye ukongeza ekudlaleni umculo kwizixhobo zakho, unokufikelela kwiihits zomzuzwana. Okanye uthenge icwecwe lamva lomculi wakho owuthandayo.
Dlala iimuvi zikaGoogle Njengomculo, fumana iindaba ezintsha kwiimovie, iinkqubo zeTV okanye uthotho.
Ezi zezona nkonzo zibalaseleyo, kodwa uGoogle ukukunika ngakumbi. Njengoko ubona, Ihlabathi liphela lamathuba ngesixhobo sakho se-Android. Ngaba ubusazi ngayo yonke into obulahlekile? Ngokuqinisekileyo awuzisoli ngokuthenga i-smartphone ye-Android. Kwaye ukuba awukayithengi okwangoku, xa ugqibile ukufunda le posi ngokuqinisekileyo uya kuqiniseka.
Uqwalaselo olusisiseko lweselfowuni yakho ye-Android
Sele uyithengile? Ndiyakuvuyela. Ukuba ekugqibeleni unesixhobo sakho esitsha se-Android ezandleni zakho lixesha lokuba uzilungiselele. Kule ncwadana Android siza kukukhokela inyathelo ngenyathelo ukwenza uqwalaselo lokuqala. Emva kokususa ifowuni yakho entsha kwibhokisi yayo, kuya kufuneka yongeza iSIM khadi yethu kuqala. Kwaye ngaphandle koloyiko, cofa iqhosha lamandla ukuqala ubumbeko.
Uluseta njani ulwimi lwakho kwi-Android
Yinto yokuqala ekufuneka siyenzile xa sivula isixhobo sethu esitsha se-Android. Emva komyalezo owamkelekileyo woonozakuzaku asibulisa ngawo Kuya kufuneka sikhethe ulwimi esiza kunxibelelana ngalo ngalo mzuzu kunye ne-smartphone yethu. Kuluhlu olubanzi lweelwimi siya kukhetha ezifanelekileyo, kwaye kunjalo.
Ukuba nangaliphi na ixesha sifuna ukutshintsha ulwimi ekhethwe kuqwalaselo lokuqala sinokuyenza ngokulula. Asiyi ngqo ngqo kwimenyu ye-smartphone yethu «Useto». Kwaye ukusuka apha, kuhlala kungena ngaphakathi "Useto oluphambili" kufuneka sijonge ukhetho "ubuqu". Ukusuka kule ndawo, ngokunqakraza kuyo "Ungeniso lolwimi kunye nokubhaliweyo" Singafikelela kuluhlu lweelwimi kwaye silitshintshe siye kwezi sizifunayo.
Ukuseta isixhobo sakho se-Android njenge "isixhobo esitsha"
Iinguqulelo zamvanje ezikhoyo ze-Android iinketho ezintsha zokumisela xa sisungula i-smartphone. Ke, kwimeko apho ifowuni entsha ethengweyo isebenza ukuvuselela eyangaphambili, kuya kuba lula kuyo. Ukusuka kweli nqanaba, Singaqwalasela ifowuni entsha ngeendlela ezifanayo nezindala. Ngaphandle kwezicelo ezifanayo esizifakileyo, amaqhosha e-Wi-Fi, njl.
Kodwa oku akusiyo imeko yethu ngoku. Kwaye ukuqhubeka nolungelelwaniso olusisiseko kufuneka sikhethe ukhetho "Misela njengesixhobo esitsha". Ngale ndlela la manyathelo alandelayo kunye noseto ziya kungeniswa okokuqala. Ke masiqhubekele kwinqanaba elilandelayo.
Khetha inethiwekhi ye-wifi ye-smartphone yethu ye-Android
Nangona inyathelo lokukhetha inethiwekhi ye-Wi-Fi ayifuneki ngokupheleleyo ukugqiba ukuseta yesixhobo esitsha. Ukuba kuyacetyiswa kakhulu ukwenza le misebenzi ngonxibelelwano lwe-intanethi. Ngale ndlela ukucwangciswa kwesixhobo kuya kugqitywa. Kuluhlu lweenethiwekhi ezikhoyo ze-Wi-Fi, kufuneka sikhethe ezethu. Ukuqhubeka, emva kokufaka ikhowudi yokufikelela, kufuneka sikhethe «qhubeka».
Kuqhelekile ukusebenzisa ngaphezulu kwenethiwekhi enye ye-Wi-Fi imini yonke. Ngesi sizathu, kwaye ukuze udibanise zonke iinethiwekhi ozifunayo, sichaza indlela yokwenza ngalo naliphi na elinye ixesha. Sifumana i icon kwakhona «Useto» ngesixhobo sethu kwaye ukhethe ukhetho «Wifi ". Emva kokuvula uqhagamshelo lweWi-Fi, siya kuba nakho ukubona uthungelwano olukhoyo kuluhlu. Ngokulula Kuya kufuneka ukhethe inethiwekhi oyifunayo kwaye ufake ikhowudi yokufikelela. Isixhobo sethu siza kuqhagamshela ngokuzenzekelayo kumanethiwekhi agciniweyo xa sikugubungela.
Ungena njani ngeakhawunti yethu kaGoogle.
Sicinga ukuba sele sineakhawunti kaGoogle okanye siyenzile ngokulandela le miyalelo ingentla. Ukufikelela kwaye ukwazi ukonwabela zonke iinkonzo ezibonelelwa yiakhawunti yethu kulula kakhulu. Kuya kufuneka nje Sichonge ngeakhawunti yethu "xxx@gmail.com" kwaye ufake ipassword yethu. Nje ukuba kwenziwe oku, kufuneka samkele iimeko zenkonzo ukuze siqhubeke nenqanaba elilandelayo.
Kuyenzeka ukuba uqhubeke nokucwangciswa ngaphandle kokuba uneakhawunti ye "gmail". Kodwa kwakhona sicebisa ukuba uyenze naye. Ngale ndlela sinokuyonwabela ngokupheleleyo iphakheji yeenkonzo esizifumana kuGoogle. Kwaye ke ukucwangciswa kuya kugqitywa ngakumbi kuzo zonke iinkalo.
Uyongeza njani enye iakhawunti ye-imeyile
Nje ukuba inyathelo elidlulileyo ligqitywe, imenyu yoqwalaselo iya kusibuza ukuba sifuna ukongeza enye iakhawunti ye-imeyile. Apha singongeza ezinye iiakhawunti ze-imeyile esizisebenzisayo ngokuqinisekileyo. Nokuba yeyabanini bakaGoogle okanye nawuphi na omnye umsebenzisi. Isicelo seGmail siya kujongana nokuzilungiselela kwiifolda. Ungayibona yonke imeyile ngaxeshanye okanye ukhethe ngokukodwa iibhokisi zebhokisi, ezithunyelweyo, njl.
Njengothungelwano lweWi-Fi, nje ukuba inkqubo yokumisela isixhobo igqityiwe, sinokongeza iiakhawunti ezininzi ze-imeyile njengoko sifuna. Ngale nto siza kuya kwi icon ephindaphindwe «Useto» kufuneka sijonge phi ukhetho "IiAkhawunti". Ukusuka apha siza kukhetha "yongeza iAkhawunti" kwaye siya kufaka igama leakhawunti, ipassword, njl. Kwaye kwangoko iya kuvela kwi-inbox kunye nabanye.
Qwalasela inkqubo yokhuseleko kunye nokuvula kwi-Android
Kule meko, ukhetho lokhuseleko olunokuthi lusinike isixhobo sethu ludlala indima ebalulekileyo. Oko kukuthi, kuxhomekeke kwizibonelelo ezinxulumene nazo onazo. Okwangoku phantse zonke izixhobo ezitsha ziza zixhotyisiwe umfundi weminwe. Kwaye nangona kukho iifowuni ezingekadibanisi obu buchwephesha, kukwakho nezo zinazo iris umfundi o ukuqaphela ubuso.
Ukuba isixhobo sethu asinazo naziphi na iindaba kwiinkqubo zokhuseleko akufuneki sikhathazeke. Isenokukhuseleka kubantu besithathu ukuba sizisebenzisa kakuhle izixhobo ezisinika zona uGoogle. Singasoloko sinomzekelo wokuvula okanye uyenze nge ikhowudi yamanani. Kweli nqanaba sinokukhetha enye okanye sizidibanise kunye. Ngandlela thile sihlala sicebisa ukusebenzisa enye.
Eli linyathelo lokugqibela kulungelelwaniso olusisiseko lwezixhobo zethu, kodwa ayibalulekanga kangako kuloo nto. Nje ukuba ukhethe inkqubo yokhuseleko, i-smartphone yethu sele ilungile. Ezi setingi zihlala zifana phantse kuzo zonke izixhobo ze-Android. Kodwa iodolo inokutshintsha kuxhomekeke kubume bokwenza ngokwezifiso kunye nohlobo lwenkqubo yokusebenza esinayo.
Ngokusekwe kwindawo yethu, siya kukhetha izowuni yexesha efanelekileyo. Ukusuka apho sinokuqiniseka ukuba ixesha eliboniswe sisixhobo lichanekile.
Ngoku ewe, sinokonwabela isixhobo sethu esitsha ngokupheleleyo. Kodwa kuqala, sinokukunika umnxeba omncinci wokwenza umntu. Ngokungathandabuzekiyo yenye yeempawu ezibonakalayo zale nkqubo yokusebenza, ukubanakho ukuyinika imbonakalo esiyithandayo kakhulu. Ukusuka kuqwalaselo olusisiseko lwesixhobo Sinokukhetha umxholo, iithowuni zomsindo okanye umyalezo esithanda kakhulu. Njengaye iphepha lodongo lock okanye ukusetyenziswa kwescreen. Okanye imibala ye-LED yesaziso edityaniswe kwisaziso ngasinye.
Ukwazi njani ukuba inkqubo yam ye-Android ihlaziyiwe
Ukubala kwizicelo ezininzi ezifakwe kwangaphambili zikaGoogle, i-Smartphone sele isebenza ngoku phantse kuwo nawuphi na umsebenzi. Kodwa Ngaphambi kokuba uqhubeke nokufakwa kwezicelo zangaphandle, kuyathakazelisa ukujonga ukuba isoftware yethu ihlaziyiwe. Ukwenza oku, ngaphakathi kwimenyu yesixhobo esiya kuthi siye kuyo "Useto". Siza kujonga ukhetho "Malunga nesixhobo sam" kwaye siza kucofa kuyo. Nje ukuba olu khetho luvuleke kufuneka sikhethe "Khangela uhlaziyo" (okanye ukhetho olufana kakhulu). Ifowuni ngokwayo iya kujonga ukuba inalo naluphi na uhlaziyo olulindelweyo ukufaka.
Ukuba kukho uhlaziyo olulindelekileyo, kufuneka ucofe nje "Khuphela uze ufake" kwaye ngokukhawuleza ukukhuphela kuya kuqala, okuya kufakwa ngokuzenzekelayo. Le nkqubo ingathatha imizuzu embalwa kwaye ifowuni yethu iya kuhlaziywa. Qaphela oko ngekhe ukwazi ukukhuphela uhlaziyo kunye nebhetri engaphantsi kwamashumi amahlanu eepesenti.
Njengengcebiso esebenzayo, kunjalo Kulula ukwenza lo msebenzi ngonxibelelwano lwe-wifi. Ukusukela ukukhutshelwa kohlaziyo lwenkqubo yokusebenza kunokunyusa ukusetyenziswa kwedatha yethu ngokugqithileyo.
Inkqubo yokusebenza ehlaziyiweyo ihlala ikhuselekile kwaye isebenza ngokufanelekileyo. Ukulungiselela isixhobo kunye nokusebenza kwayo kunye nokusetyenziswa kuhlala kungcono ngenguqulelo yamva nje ekhoyo. Ukuhlaziya izinto ezintsha kuya kukuthintela ekuhlangabezaneni neengxaki zokuhambelana nokusetyenziswa, kunye nokusetyenziswa kwebhetri kunokuphucula.
Indlela yokukhuphela usetyenziso kwi-Android
Ngoku ewe. I-Smartphone yethu ikulungele ukufumana izicelo. Ngoku sinokukhuphela kwaye sifake izicelo ezininzi njengoko sifuna. Kwaye ingcebiso yethu ephambili kukuba siyenze ukusuka kwivenkile esemthethweni, iGoogle Play Store. Kuyo siya kufumana phantse isicelo esisigidi kwinkonzo yethu kuyo yonke into esinokucinga ngayo. Kufuneka nje sicinezele i-icon yeVenkile yokudlala eza kuqala ifakelwe ngokungagqibekanga kwaye sinako ukufikelela.
Kuhlelwe nge iindidi apho sinokufumana khona, umzekelo, ezolonwabo, indlela yokuphila, ukufota, imfundo, ezemidlalo, njalo njalo ukuya kuthi ga ngaphezulu kokukhetha okungamashumi amathathu. Sinokukhetha ukukhangela phakathi kwezona zidumileyo, okanye ukukhangela imidlalo, iimuvi, umculo. Izinketho ezingapheliyo apho siya kufumana ngokuqinisekileyo isicelo esisifunayo.
Ukufaka usetyenziso kwizixhobo zethu, into yokuqala kukufikelela kwiVenkile yokudlala. Nje ukuba ungene ngaphakathi, xa sifumene isicelo esifunwayo, kufuneka nje Cofa kuyo. Xa siyivula, sinokubona ulwazi olunxulumene nomxholo wayo, jonga ii-skrini ngokwazo ze-App uqobo, kwaye nditsho nokufunda izimvo kwaye ndibone ukulinganiswa komsebenzisi. Kanye nokujonga ukuba isicelo simahla okanye sihlawulwe.
Uyifaka njani okanye uyikhupha njani iiapps kwi-Android
Ukuba usiqinisekisile, vele kufuneka ucofe ku "faka". Isicelo siza kuqala ukukhuphela kwaye sifake kwisixhobo sethu. Nje ukuba ukufakela kugqityiwe, usetyenziso luya kwenza i icon entsha kwidesktop. Ukuyivula kwaye uyisebenzise, ​​kufuneka nje ucofe i icon yayo. Ngaba uyabona ukuba kulula kangakanani? Akunakuba lula ukukhuphela kunye nokufaka usetyenziso.
Kodwa, Kuthekani ukuba andiyithandi le app ndiyikhupheleyo? Akukho ngxaki, sinokuzikhupha ngokulula. Olunye ukhetho kukuya "Useto". Ukusuka apha sikhetha "Izicelo" kwaye siza kubona uluhlu lwezicelo ezifakiwe. Ngokucofa isicelo esifuna ukusikhupha, imenyu iyavela apho kufuneka sikhethe khona NONE. Okanye, kuxhomekeka kuhlobo lwe-Android esilusebenzisayo, ngokucinezela kwaye ubambe nasiphi na isicelo, umnqamlezo uvela kuye ngamnye wabo. Kwaye ngokunqakraza emnqamlezweni, isicelo siya kukhutshwa.
Izixhobo ezibalulekileyo kwi-Android
Enkosi kubuninzi bezinto ezinokuthi zisenziwe kwiVenkile yokudlala, i-smartphone nganye yahlukile kwenye. Isixhobo sakho sithetha lukhulu ngawe. Ngokujonga usetyenziso esilufakileyo sinokwazi ukuba zeziphi izinto esizithandayo kunye nezinto esizikhethayo. Imidlalo, imidlalo, umculo, ukufota. Kukho iindlela ezininzi esinokuthi sizikhuphelele ukuba kunzima ukwenza ukhetho oluza kwanelisa wonke umntu.
Kodwa nangona kunjalo, sinokuvumelana nesininzi uthotho lwezicelo "ezisisiseko"”. Kwaye siza kukucebisa ngezona zicetyiswayo kuthi. Phakathi kwabo sikhethe eyona idumileyo kwicandelo ngalinye. Ukuba uzifakile uya kuba nakho ukufumana okuninzi kwifowuni yakho entsha ye-Android.
Ezakho izicelo zonxibelelwano zi i "abc" yezicelo ezikhutshelweyo zee-smartphones. Kwaye zingaphezulu kweenkqubo zokusebenza, iimveliso kunye neemodeli. Ke asinakho ukungazihoyi izicelo ezixabisa ezona yure zisetyenziswayo. Ii-Smartphones ngokuqinisekileyo azicingeki ngaphandle kwezi zicelo. Bahlala omnye komnye nangokuchasene.
Ithathwa njenge uthungelwano lothungelwano, Sinokukuxelela okuncinci okungaziwayo malunga nale nethiwekhi yoluntu. Inyani yile yokuba ukuba uthathe isigqibo sokutshintshela kwi-Smartphone kwaye awukabinayo iakhawunti ye-Facebook, eli lixesha.
Enye yeendlela zonxibelelwano ezibalulekileyo zokunxibelelana nehlabathi. Imvelaphi yasekuqaleni njengenkonzo ye-microblogging. Kwaye waguqula umbulelo ekusebenziseni kwayo, kwaye kunjalo kubasebenzisi bayo isixhobo sokwenene sonxibelelwano. Ubuntu, abasemagunyeni, oonondaba abaqeqeshiweyo kunye nabadibanayo badibanisa ngokugqibeleleyo kwi-cocktail yolwazi kunye noluvo esingenako ukungahoyi.
Umthuthukisi: I-Twitter, Inc.
Inethiwekhi yentlalo yabathandi bokufotaukuya. Okanye yile ndlela eza ngayo kwii-smartphones zethu okokuqala. Okwangoku iguqulwe yaba iqonga elinamandla apho unokufumanisa khona abantu, iifoto, amabali kunye neenkampani ezinomdla. I-Instagram ayinakuphuthelwa kwi-Smartphone entsha ye-Android.
Unxibelelwano yinjongo yokuqala yomnxebaokanye, nokuba smart okanye hayi. Kwaye njengoko sisazi, indlela yethu yangoku yonxibelelwano itshintshile. Kunqabile ukuba kwenziwe nayiphi na ifowuni. Kwaye nge-Smartphone ye-Android ezandleni zakho, kunyanzelekile ukuba ufake ubuncinci kuzo zombini.
Es eyona nto ikhutshelweyo kunye nesetyenzisiweyo yokuthumela imiyalezo. Ngubani ongasebenzisi i-WhatsApp namhlanje? Kukho nezinye iifemu ezibandakanya esi sicelo, phakathi kwazo sifumana ukufakelwa kwangaphambili. Isixhobo esisisiseko sokubakho ehlabathini
Kucingwa njenge "enye" ​​ngabaninzi. Kodwa ikhethwe ngcono kune-WhatsApp kuthelekiso olungenakubalwa. Undoqo wayo uyafana nalowo ubangisana naye. Kodwa nge Umsebenzi oqhubekayo kuhlaziyo kunye nokumiliselwa kwemisebenzi eyahlukeneyo Uyakwazi ukuba bhetyebhetye ngakumbi kune-WhatsApp.
Izicelo eziluncedo ze-smartphone yakho
Eziapps zikhankanywe apha ngasentla zezona uya kuthi uzibone phantse kuzo zonke ii-smartphones ezisebenzayo namhlanje. Kodwa kubukhulu beVenkile kaGoogle yokudlala kukho indawo yokufumana okungakumbi. Kwaye ikho usetyenziso olunokukusebenzela ngenxa yento oyifunayo. Iiapps ngaphandle kwamathandabuzo baya kunika i-smartphone yakho enye ingongoma yokunceda kunye nokusebenza.
Ke ngoko, apha ngezantsi siza kucebisa ezinye zezicelo esizithanda kakhulu kwaye kunjalo sisebenzisa yonke imihla. Kwabaninzi, ii-smartphones lolunye uhlobo lonxibelelwano kunye nokuzonwabisa. Kodwa kwabanye abaninzi sisixhobo esisebenzayo esinokusinceda kakhulu.
Indawo yokugcina yonkeLe yindlela isicelo esichaza ngayo enokukunceda kakhulu ukuba ucwangciswe ngakumbi. Ifunyenwe njengencwadana yokubhalela kodwa isebenza ngakumbi. Ungagcina iifoto, iifayile, ii-audios, okanye amanqaku okubhaliweyo. Kusebenza njengezikhumbuzo zokuqeshwa okanye imisebenzi ekufuneka yenziwe. Esinye sezona zicelo zigqibeleleyo zeofisi okanye zezinto zakho eziye zavela kakhulu.
Yintoni entsha kwaye iluncedo malunga nesi sicelo kukuba ungayisebenzisa nakwesiphi na isixhobo sakho. Kwaye uya kuhlala uzivumelanisa ngaxeshanye. Ke akufuneki ukuba ukhathazeke ngokujonga inowuthi kwifowuni yakho okanye kwithebhulethi. Into oyibhalayo e-Evernote iya kuba kuzo zonke izixhobo ozisebenzisayo. Enye ye-App eluncedo kakhulu uya kuyifumana.
U-Evernote-uMququzeleli wamaNqaku kunye noMcwangcisi wemihla ngemihla
Umthuthukisi: IArhente ye-Evernote
Okunye isixhobo esikhulu sokuququzelela umsebenzi. Kukulungele ukwenza imisebenzi yomsebenzi weqela. Yenza ibhodi kwaye wabelane ngayo nabani na ofuna ukusebenzisana naye. Unga yenza uluhlu kwiikholamu ebonakalayo kakhulu. Y bagcwalise ngamakhadi, umzekelo, ukusuka to-dos. La makhadi angarhuqwa ukusuka kwikholamu ukuya kwikholamu ngokulula, umzekelo ukusuka kwi-to-dos ukuya kwimisebenzi egqityiweyo.
Ukuba wabelana ngeofisi okanye imisebenzi neqela, asinakucinga ngendlela esebenzayo nesebenzisekayo yokuzilungiselela. Yabelana ngebhodi yakho noogxa bakho. A) Ewe wonke umntu uya kuba nokufikelela kulwazi oluhlaziyiweyo ngomsebenzi osalindelweyo kunye nomsebenzi ogqityiweyo. Isicelo esinconyelwe kakhulu.
Trello: Lawula iiProjekthi zeQela
Umthuthukisi: UTrello, Inc.
Enye yezicelo ezihlala ziphumelela indawo phakathi kweentando zethu. Ngesiqubulo se "Gcina ixesha elizayo", isinceda ukuba singaphoswa nayiphina into enomdla kuthi. Yifake "epokothweni" yakho kwaye uyifunde xa unexesha. Ungagcina amanqaku kunye neendaba ngokungenamda. Kwaye ungazi-odola njengoko kufanelekile. Ngaphandle kwamathandabuzo isixhobo esenzelwe abo bangayeki. Kwaye kuluncedo kakhulu ukuba ungaphoswa naliphi na inqaku elibalulekileyo kuthi. yintoni enomdla kuthi.
Ipokotho iluncedo njengoko kulula ukuyisebenzisa. Ukugcina upapasho "kwipokotho" yakho kuyakhawuleza kwaye kulula. Emva kofakelo Ipokotho ibandakanya ulwandiso kunye ne icon yayo. Sebenzisa inketho yesabelo esinokuyigcina epokothweni ngokuzenzekelayo. Kwaye kufuneka sifikelele kwisicelo ukukhangela yonke into esifuna ukuyigcina kamva. Uluvo olukhulu olunokuba luncedo olukhulu kuthi.
Ipokotho: Gcina. Funda. Khula.
Umthuthukisi: IQumrhu leMozilla
Esi sicelo siyilelwe ngombono ofana kakhulu nePokotho. Nangona iquka ezinye iintlobo zeendaba. Ihlabathi lepodcast fumana ngakumbi nangakumbi amanani apheleleyo ngenxa yolu hlobo lweqonga. Uburharha, ukuzonwabisa, inkcubeko okanye iinkqubo zomculo. Yonke into ingena kwiVoox. Iqonga elikhulu nelicwangciswe kakuhle apho unokumamela inkqubo oyithandayo kanomathotholo nanini na ufuna.
Ukuba awunakuze umamele unomathotholo akubonise eyona uyithandayo, kunokwenzeka ukuba sele ikwi-voox. Ungarhuma kwiimpapasho ezahlukeneyo. Ngale ndlela uya kwazi xa kukho umxholo omtsha onxulumene nezinto ozithandayo kunye neenkqubo zakho ezilandelelweyo. Ayizizo zonke izinto eziza kwenzelwa umsebenzi, akunjalo? Umlingani ogqibeleleyo wexesha lakho lokuzonwabisa.
IPodcast kunye nerediyo iVoox
Umthuthukisi: IVoox Podcast y Radio
Sinokukucebisa kwizicelo ngaphandle kokuma ixesha elide. Ezi zezinye zezo sizisebenzisa kakhulu kwaye esizithatha njengezona ziluncedo kakhulu. Kodwa njengomsebenzisi ngamnye lihlabathi. Elona cebiso lililo kukuntywila ungene kwiVenkile yokuDlala kwaye ufumane "ubuncwane" bakho. Ukuba ufuna isicelo sento ethile ekhuselekileyo kukwivenkile yesicelo sikaGoogle.
Kuyinto eqhelekileyo ukuyifunda nokuyiva loo nto I-Android ayisiyinkqubo yokusebenza ekhuselekileyo. Okanye ubuncinci ayilikhulu leepesenti. Kwaye ngokuyinxenye kuyinyani. Into ethi, kwelinye icala, ibe yeyona nkqubo isetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela, kuyinto eqhelekileyo ukuba yeyona ihlaselwe yimalware. Ukugcina isixhobo sethu sikhuselekile kukho uthotho lwezicelo kunye ne-antivirus esinokulawula ngayo "ukucoca" kweselfowuni.
Kuya kufuneka uhlale uyikhumbula loo nto ukhuseleko lwezixhobo zethu luxhomekeke kakhulu kumngcipheko esizibeka kuwo. Ukufikelela kwiiwebhusayithi ezinedumela elithandabuzekayo. Vula ii-imeyile ezikrokrisayo. Okanye ukukhuphela ezinye iinkonzo ezikumgangatho ophantsi, ezigcwele iintengiso. Njengoko sibona, zininzi iindlela ezinokuthi zosulelo. Ngethamsanqa, i-Android isebenza ngokuqhubekayo ukuphucula ukhuseleko. Kwaye yenza itshekhi enzima kwiiapps ezinokuba yingozi ngokubaphelisa kwiVenkile yokudlala.
Njengomsebenzisi osebenzayo we-Android ukusukela oko yaqalwa, kufuneka nditsho ukuba andikaze ndidibane nengxaki enkulu ngenxa yosulelo lwentsholongwane kwi-smartphone yam. Kwaye kuyinyani, njengoko kusenzeka kwikhompyuter, oko uhlalutyo olungagungqiyo lweefayile kwisixhobo esenza inkqubo okanye usetyenziso, iqukumbele inciphise ukusebenza kwayo. Ke ngoko, ukunqanda iingxaki kwiintsholongwane ngaphandle kokuphulukana nentsebenzo, kufuneka kuthathwe amanyathelo athile kunye nomxholo esiwudlayo kunye nalapho uvela khona.
Kodwa ukuba into oyifunayo kukuba ulale ngoxolo usazi ukuba naphi na apho ufikelela khona ngamagama okugqitha kunye nedatha iya kukhuseleka, kungcono ukuba ufake usetyenziso lwe-antivirus. Olona khetho lubalaseleyo Ukhuseleko lwama-360, oluThathwa njengeSoftware yoKhuseleko lweSelfowuni zehlabathi. Ayilolize inenqaku le-4,6 kwabahlanu kwiVenkile yokudlala. Ukongeza kokufumana ukhuphelo olungaphezulu kwezigidi ezingamakhulu amabini.
Ukhuseleko olukhuselekileyo -I-Antivirus, iBooster, isiCoci seeFowuni
Umthuthukisi: UKhuseleko loKhuseleko
Ungayigcina njani idatha yam kwi-Android
Njengomgaqo ngokubanzi, ii-smartphones zethu zinolwazi olubalulekileyo kuthi. Ngamanye amaxesha ngohlobo lwemiyalezo, okanye iifoto kunye nevidiyo. Okanye amaxwebhu omsebenzi ekungafanelekanga ukuba siphulukane nawo. Ukuze yonke idatha yethu ikhuseleke ingozi, okanye ukufikelela komntu wesithathu, kungcono ukusebenzisa izixhobo ezenziwa ukuba zifumaneke kuGoogle kuthi.
Ndiyabulela Abafowunelwa bakaGoogle, iifoto zikaGoogle okanye iDrayivu kaGoogle, sinokuba nabo, iifoto, iifayile okanye amaxwebhu ngokukhuselekileyo naphina. Kodwa ukuba into esiyifunayo kukwenza ikopi yogcino ngaphakathi kwesixhobo uqobo, siya kukuxelela ukuba ungayenza njani. Ukwenza ikopi yethu yogcino kufuneka sivule ukhetho «Useto». Siya kuseto oluphambili kwaye sijonge "Eyomntu". Olunye useto ngu NONE.
Ngaphakathi kolu khetho sinokhetho oluninzi olukhoyo. Singayikopa idatha yethu kwisixhobo uqobo okanye siyenze ngeakhawunti yethu kaGoogle. Ngenxa yoku kufuneka sichongwe kwi-smartphone ngeakhawunti yethu. Ukusuka apha sinokubuyisela useto lwenethiwekhi, kwimeko yotshintsho lomqhubi, umzekelo. Kwaye sinokubuyisela kwakhona idatha yefektri, kwimeko apho sifuna ukuzicima ngokupheleleyo izixhobo zethu.
Onke amanyathelo angaphambili esiye sawachaza aya kuba luncedo kakhulu ukuba umtsha kwisixhobo se-Android. Kwaye ziya kuba njalo ukuba uphambi kweziqalo zakho kule teknoloji yeselfowuni. Sizamile ukwenza isikhokelo esipheleleyo ukuze ungalahleki nangaliphi na ixesha. Kodwa Kungenzeka ukuba awumtsha kwihlabathi le-Smartphone. Ewe uku-Android.
Ke ukwenza esi sikhokelo sibe bhetyebhetye, siya kubandakanya inyathelo elinye. Le yindlela esiza kwenza ngayo lo msebenzi wamkelekile kubo bonke abo bafuna ukujoyina inkqubo ehamba phambili yokusebenza kweeselfowuni. Abasebenzisi abatsha kunye nabo bavela kwezinye iinkqubo zokusebenza. Kwaye ukuba utshintsho olusuka kwinkqubo yokusebenza luye kolunye alubeki mqobo.
Ungayitshintshela njani idatha yam kwi-Android esuka kwi-iPhone
Ukusuka kuGoogle bahlala bethathela ingqalelo ukufudukela kwi-Android kwabasebenzisi kwi-iPhone. Kwaye kangangeminyaka kuphuhliswa usetyenziso olwenza lula umsebenzi wokuhambisa idatha ukusuka kwelinye iqonga ukuya kwelinye. Nangona ngamanye amaxesha le nkqubo inokubonakala ngathi iyadinisa kwaye inzima. UGoogle ubonelela ngezinye izixhobo eziza kwenza lula olu tshintsho ukusuka kwi-Android ukuya kwidatha ye-iOS
Google Drayivu ye-iOS
Enye yezona zicelo ziluncedo kakhulu ezinikezelwa nguGoogle simahla ngeqonga lesicelo sokutyikitya iapile. Ngale app singakuthumela ngaphandle kwawo wonke umxholo esiwubona ubalulekile ukusuka kwi-iPhone yakudala yokuba nayo kwi-Android yethu entsha. Kwaye sinokuyenza ngokulandela amanyathelo ambalwa alula.
Kufakwe kwi-iPhone, ukongeza ekubeni nakho ukuyisebenzisa njengesixhobo ekuso, ukugcina nokucwangcisa iifayile kunye namaxwebhu. Ikwanokuba sithi iluncedo kakhulu ekuhambiseni idatha yethu kwi-iOS iye kwi-Android. Ke ngoko, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukukhuphela esi sicelo. Y kanye efakiweyo kwi-iPhone, zichonge kuyo ngeakhawunti yethu kaGoogle. Ngale akhawunti idatha iya kukhutshelwa.
NgeGoogle Drayivu ye-iOS efakwe kwi-iPhone kufuneka senze oku kulandelayo. Isuka e imenyu yezicwangciso kufuneka sikhethe "Yenza indawo yogcino". Kufanele si khetha ukuba idatha ikhutshelwe kwiakhawunti yethu yeGoogle Drayivu apho besichonge ngaphambili. Nje ukuba kwenziwe oku, siya kukhetha iifayile ezahlukeneyo esifuna ukuzikopa ezinje ngabafowunelwa, iifoto, imicimbi yekhalenda, kwaneencoko zikaWhatsApp. Kulula, kunene?
Xa sivula usetyenziso olufanayo kwisixhobo sethu se-Android, ifakwe kwangaphambili kumzi mveliso, singafikelela kuzo zonke iinkcukacha ezikhutshelweyo. Ukusuka kuWhatsApp, xa siyifaka, kufuneka sikhethe ukubuyiselwa kwikopi kwiGoogle Drayivu ukuze izingxoxo zigcinwe. Siza kwenza okufanayo ukubuyisa abafowunelwa, iikhalenda, njl.
Iifoto zikaGoogle ze-iOS
Njengomda kwiGoogle Drayivu sinokufumanisa ukuba ukugcinwa okusinika kona akonelanga. Njengomgaqo jikelele elona pesenti liphezulu lokuhlala kweSmartphone lihambelana neefoto. Kwaye zezi zenza ukuba ukugcinwa kujongeka kuxinene.
Ngendlela efanayo naleyo sinayo kwiVenkile yeApple yeApple ukusuka kuGoogle Drayivu, kutshanje sinokuzikhuphelela iifoto zikaGoogle. Ngaphandle kokungathathelwa ngqalelo i-15 GB efumanekayo simahla sinokunciphisa indawo yokugcina izixhobo zethu. Ngendlela efanayo, Sinazo zonke iifoto kunye neevidiyo ngokukhawuleza kwi-Smartphone yethu entsha ye-Android.
Nangona uhlala Sincoma ii -apps zikaGoogle zokuqala ngenxa yokusombulula kunye nokusebenza okuqinisekisiweyo. Singacebisa iApp efanelekileyo ukuba sinokuyifumana simahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle. Ukuba awukhange ucacise okwangoku ngala manyathelo ekufuneka uwalandele, kukho isicelo esilula nesingenakungagqibeki.
Hambisa Abafowunelwa boGqithiso / ugcino
Ukuba ukuhambisa abafowunelwa kwi-iPhone yakho endala ukuya kwi-smartphone yakho entsha ye-Android yingxaki, yeka ukukhathazeka. Lo nto ukuqala nge-Android yakho ungaqali kunyawo olungalunganga Sikhethe isicelo sokuba emva kokuyisebenzisa awuyi kuthandabuza ukucebisa. Ngaphantsi komzuzu uza kubona ukuba abafowunelwa bakho bahamba njani ukusuka kwesinye isixhobo ukuya kwesinye ngaphandle kokwenza izinto zibe nzima.
Nokuba uvela kwi-iOS okanye ukuba uvuselela isixhobo kwaye ufuna ukubuyisa incwadi yakho yoqhakamshelwano Esi sisicelo esifanelekileyo. Inguqulelo yamvanje ehlaziyiweyo kunye nenqanaba le-4,8 kwiVenkile yokudlala eyandulelayo. Y amava okuyisebenzisa amatyeli aliqela aqinisekisa ukusebenza kwawo ngokugqwesileyo.
Kuya kufuneka khuphela iApp kwi-iPhone nakwisixhobo esitsha. Singena nge icon yayo kuzo zombini iifowuni ngaxeshanye. Ukuthathela ingqalelo into yokuba kufuneka isebenze iBluetooth. Kwifowuni yethu entsha siza kukhetha ukhetho «ukungenisa abafowunelwa kwesinye isixhobo». Insiza ngokwayo iya kulanda izixhobo ezikufutshane zeBluetooth. Xa sibona igama lesixhobo esidala kwiscreen, kufuneka sikhethe nje ngokunqakraza kwi icon ebonakala ngegama layo.
Siza kukhetha, kule meko, i-iPhone esifuna ukungenisa kuyo abafowunelwa. Kuyimfuneko Nika imvume yeapp Kuyimfuneko ukuze ukwazi ukufikelela kwidatha kwikhalenda. Nje ukuba senze oku, incwadi yefowuni iya kuqala ukukopa ukusuka kwisixhobo esidala ukuya kwesitsha. Kuhleli kuphela ukunika imvume kwisixhobo esitsha ukufumana idatha engenisiweyo kuluhlu lwabafowunelwa. Y ngoko nangoko sinokonwabela bonke abafowunelwa bethu kwifowuni entsha. Kulula oko.
Ngoku, asinakusebenzisa njengesizathu sokungatshintshi inkqubo yokusebenza ngenxa yobunzima bokuhambisa idatha yethu ukusuka kwelinye iqonga ukuya kwelinye. Siyabulela ezi zicelo siya kuba nakho ukufumana zonke iifayile zethu, iifoto kunye noonxibelelwano ngamanyathelo alula kakhulu.
Ngoku ukulungele ukuntywilisela kwihlabathi le-Android
Hoy Sichaze ngokweenkcukacha indlela yokungena ngokupheleleyo kwiGoogle ecosystem. Ukusuka kulo mzuzu i-Android inokuba yinxalenye yobomi bakho. Iqwalaselwe ngokufanelekileyo, I-Smartphone iba "lulwandiso" oluluncedo kuthi. Kwaye kude kube ngumqobo kubudlelwane bethu bobuqu, nokusetyenziswa ngokufanelekileyo, kunokusinceda ngeendlela ezininzi.
Ukuba uthandabuzile kwasekuqaleni ekuthatheni isigqibo phakathi kwe-iOS okanye i-Android ndikuxelele ukuba ekuhambeni kwexesha, nangaphezulu nangakumbi, zombini iinkqubo zokusebenza ziyafana ngakumbi enye kwenye. Ngokomgaqo sinokuthi aba babini bakhonza into enye ngokuchanekileyo, kwaye basebenza ngengcinga efanayo. Kwaye enye nenye ixhomekeke kwivenkile yesicelo egqibezela iinkonzo ezisisiseko abazibonelelayo.
Ukuba i-Android iyakwazi ukuphuma kwabanye kungenxa yeemeko ezithile eziphambili. Inkqubo yokusebenza ene evulekile ngakumbi kuzo zonke iinkalo. Isoftware yayo yasimahla yenye yezona mpahla zayo zibalaseleyo. Ukufikelela kuphuhliso lwesicelo ngaphandle kwesidingo seelayisensi ezibizayo. Kwaye ukubanakho kokucwangciswa okuninzi kunye nokunokwenzeka kokubakho. Ngokuqinisekileyo, ngekhe kubekho nto unokuyiphosa kwi-Android kwezinye iinkqubo zokusebenza.
Ukuba awungomqali, ungasifumana esi sikhokelo sisisiseko. Nangona esi ibisisiphelo sokwenyani sendalo yayo. Nceda abo, ngenxa yeemeko, abangakhange bakwazi okanye abafuna kude kube ngoku ukuba bafikelele kubuchwepheshe obutsha beselfowuni. Ngaba isikhokelo sethu siluncedo kuwe? Siyathemba ukuba sikuncede ukuba wenze i-smartphone yakho entsha isebenze ngokusemandleni. Konke okuseleyo kukonwabela ngokupheleleyo amava e-Android, amathamsanqa!
Kwaye ukuba unamathandabuzo okanye kukho into ongaziyo ukuba ungayenza njani, Sishiyele izimvo kwaye siya kukunceda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Isikhokelo se-Android, isikhokelo esisisiseko sabaqalayo
KwiiManyuwali ezipheleleyo ukuza kuthi ga ngoku! Kucetyiswa kakhulu!
Inqaku elilunge kakhulu. Idla ngokuthathelwa ingqalelo into yokuba bonke abantu bacace gca kwimiba ethile esisiseko
Iposti enkulu !! Kuya kufuneka bayifake kwipakethi xa uthenga ifowuni entsha ukuze ube nakho konke okuphantsi kolawulo.
Igalelo elihle. Ndiyabulela kakhulu
Yeyona ncwadi igqityiweyo, icacileyo, imfutshane kunye nolwazelelelo endiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ichasene nokungabikho kwehlazo kwincwadana yemigaqo (ithathelwe indawo yincwadana encinci elula) uninzi lweefowuni zeselfowuni. Kufuneka ithintelwe kwaye yohlwaywe.
Hi ndlela leyi, njengomzekelo WOKUNGABIKHO kweencwadana zemigaqo kwiiterminal zeAndroid:
Ungayifihli njani inombolo yam xa nditsalela umnxeba nge-XIAMI MI A2 kunye ne-A1 ene-Android 8.1?
Ndilangazelela ngoba andinakukufumana kuqwalaselo okanye kwincwadana ENGAKHO kwaye ayisosiphoso somqhubi, esele ndimbizile.
Enkosi kwangaphambili ngokundinceda
Ezi zezona zibonelelwa ngamaAmazon kwiiSmartphones zanamhlanje
Iifowuni ezili-10 eziphezulu zango-2017